Uyogculiseka sekukhona onqobe esimqoka kwelomphebezo - Bayede News
Home » Uyogculiseka sekukhona onqobe esimqoka kwelomphebezo
Uyogculiseka sekukhona onqobe esimqoka kwelomphebezo
UMA ukhuluma ngenkulisa yebhola lomphebezo esifundazweni iKwaZulu-Natal ngeke nakancane uyikhohlwe inkulisa ka-Emmanuel Mandla Ngema ebizwa ngele-Emmanuel Ngema Tennis School.
Le nkulisa muva nje ibimele iKwaZulu-Natal emqhudelwaneni wabangaphansi kweminyaka eli-15 obizwa nge-Interprovincial Tennis Tournament, osuke unamaqenbu ali-16. Emva kokuthi nyakenye iKwaZulu-Natal ingalibonanga elidlalayo njengoba yaphuma indawo yesi-9, ibe isithumela uNgema ukuthi kube nguye ohamba nenkulisa yakhe nalapho efike wenza ezibukwayo kuba yiqembu lakhe elibaqwaqwada bonke emakhanda.
“Angazi ukuthi ngingaqalaphi kodwa indlela izingane ezidlale kahle ngayo zingihlabe umxhwele. Umuntu okunguyena odlale kakhulu okuyimanje engisamangele ngekhono alivezile wuNonhlanhla Ngcobo. Ungenzele into yamehlo, wonke umuntu ubebabaza ikhono lakhe,” kubeka uNgema.
Le nkulisa izicijela enkundleni enkulu yomphebezo iWestridge, eMayville, ekungeneni kweTheku uma uqhamuka ngasentshonalanga. Nyakenye, ngoZibandlela le nkulisa ibimele iTheku, emqhudelwaneni oba njalo ngale nyanga obizwa ngamaSouth African Local Government Association (SALGA). EzikaNtusi zibuye nendondo yegolide, okube umlando wukuthi le nkulisa ibisiyinqoba okwesithathu.
“Ngizizwa ngeneme njengoba igama lami lilokhu lindizela phezulu ekwenzeni kahle kulo mdlalo engiwuzwa ngaphakathi. IKwaZulu-Natal iyakhonya kumphebezo ngenxa yamagalelo ami. Uma singathola ukuthi sixhaswe angingabazi ukuthi singahlonishwa umhlaba wonke ngokukhiqiza abadlali abancane,” kubeka uNgema.
Ekuqaleni konyaka izingane ezimbili azicijayo, okunguSimphiwe Ngwenya noSiyabonga Jaca, zithole ithuba eliyingqayizivele zithola umfundaze wokuyofunda eDurban Preparatory High School (DPHS).
UNgema akakungabazi ukuthi inkulisa yakhe izophinde yenze ezibukwayo emqhudelwaneni ozoqala namuhla obizwa ngeDunlop Mini Series. Lo mqhudelwano uzobanjelwa khona eWestridge.
“Nakule mpelasonto angingabazi ukuthi izingane zami zizophinde zingijabulise. UJaca noNgwenya yibona abahlezi bezenzela kulo mqhudelwano. Namanje ngisasho ukuthi ngeke ngikuthole ukuphumula ngingamkhiqizanga umdlali oyonqoba iGrand Slam noma iWimbledeon,” kuphetha uNgema.
nguSabelo Maphumulo May 15, 2018